Manicure -ka Shiinaha Ka Saar Qalabka Saliidaha Saliidaha Saliidaha Saliida 5 ee 1 Tapered Drills Milling Cutter Safety Carbide Nail Drill Bits warshad iyo alaab -qeybiyeyaasha | Yaqiin
Xirmooyinka Ciddiyaha Carbide
Xirmooyinka Qodista Ciddiyaha dhoobada
Xirmooyinka Qodista Dheemanka Diamond
Dejinta Qoditaanka Cidiyaha
Quartz Naill Drill
Silicone Ciddiyaha Qodista
Mashiinka Qodista Cidiyaha
Abrasive White Zebra Sanding Band For ciddiyaha
OEM ODM Mashiinka Ciddiyaha Daloolinta 35000rpm
Qoob -ka -ciyaarka Ciddiyaha Rainbow Rakibka Dheeman
Qalabka Manicure Daloolinta Ciddiyaha Ciddiyaha Jumlada
Qiimaha Jaban ee Diamond Ciddiyaha Qodista Fanka Ciddiyaha ...
Calaamadda Gaarka ah ee Carbide Ciddiyaha Quruxda Farshaxanka Ciddiyaha ...
Manicure Ka saar Qalabka Saliidaha Saliidaha Saliidaha ...
Manicure Ka Saar Qalabka Saliidaha Saliidaha Saliidaha Qalabka 5 ee 1 Mashiinka Mashiinka Mashiinka wax lagu gooyo
Waa maxay qoditaanka ciddiyaha carbide?
Cqoditaanka qoditaanka ciddiyaha arbide waxaa laga sameeyey alaab carbide oo tayo sare leh, sidaa darteed waxay leedahay nolol adeeg dheer. Waxay leedahay waxoogaa dhimis ah si ay u noqoto mid la isticmaali karo oo adag. Waxaan si dhakhso leh oo hufan u fiiqi karnaa, si siman oo nadiifin karnaa jel iyo ciddiyaha akril. Waxay ku habboon tahay acrylic iyo ciddiyaha dhabta ah, oo u fiican manicure iyo pedicure, waxay noqon kartaa mid la isticmaalo muddo dheer. Way adag tahay waxay ku xigtaa dheemanka, waxayna ku habboon tahay inta badan mashiinnada qodista ciddiyaha oo adeegsada 3/32 ″ bit.
Nooca: Carbide Musmaar Qodista Bit
Waxyaabaha: Carbide & Stainless
Wadarta Miisaanka: Qiyaastii 6.0g / 0.2oz
Cabbirka buunshada: Φ 6.60 mm
Dhexroorka Madaxa: 6mm 6.6mm 4mm
Dhererka Madaxa: 13mm 13.8mm 14.5mm 15mm
Midabka Madaxa: lacag, dahab, nano buluug ah, guduud, qaansoroobaad, madow
Grit: Laga bilaabo ganaax ilaa dhab: 3XF 2XF XF F (ganaax) M (dhexdhexaad) C (adag) XC 2XC 3XC 4XC 5XC
MOQ: 50pcs mid kasta
Isticmaalka: Qodista ciddiyaha, Manicure, Nadiifinta Cidiyaha, faylka ciddiyaha, saloon farshaxanka ciddiyaha, Pedicure
Waxaan nahay warshad xasaasi ah oo weyn oo xirfadeed ee Shiinaha. OEM iyo ODM Adeegga hal-joogsiga ah ayaa la habeeyay.
Tilmaamaha qoditaanka ciddiyaha carbide?
Wax yar carbide carbide waa mid raaxo leh oo moodada leh, Waxay geli kartaa geeska ciddiyaha si ay u nadiifiso googoysyada iyada oo aan la xoqin ciddiyaha, way ilaalin kartaa oo ma dhaawaceyso maqaarkaaga, waxay ku siin doontaa khibrad qabasho oo raaxo leh oo nabdoon. Daloolinta ciddiyaha carbide wuxuu abuuraa boodh yar oo leh khilaaf yar iyo kuleyl. Waa hadiyad ku habboon saloon iyo qof jecel farshaxanka ciddiyaha DIY guriga.
Faa'iidooyinkayaga qoditaanka ciddiyaha carbide?
1. Waxaan leenahay geedi socod sifo leh oo la yiraahdo 5 in 1 Wax yar carbide carbide, sababtoo ah isku -dheelitirnaanta ayaa is -beddelaysa xagga sare ilaa saldhigga, laga bilaabo ganaax ilaa qalafsan. Qoditaanka qoditaanka carbide wuxuu leeyahay 2 jiho oo wareegsan labadaba gacanta bidix iyo midigta. Waxay ka saari kartaa ciddiyaha akril -ka, ciddiyaha jelka, budo qoyan iyo midabada ciddiyaha oo leh tayo sare leh. Aad bay ugu fiican tahay daweynta ciddiyaha jelka ee aadka u qaalisan iyo hyper-keratosis.
2. Waarta oo si sahlan loo nadiifin karo. Si gaar ah loogu isticmaalay dusha, qaabeeyaan dusha sare iyo jarka, gaabin iyo goynta gadaal.
3 Xirmooyinka Ciddiyaha Carbide waxaa loogu talagalay in si dhaqso ah looga saaro jellada ciddiyaha, mana dhaawici doonto maqaarkaaga iyo ciddiyaha dabiiciga ah. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu qurxiyo dusha ciddiyaha dhinacyada darbiyada iyo aagagga cidhiidhiga ah, oo si gaar ah loogu isticmaalo dusha, qaabaynta dusha, gaabinta iyo goynta gadaal dambe.
Wadarta Miisaanka: Qiyaastii 6.0g/ 0.2cz
Cabbirka buunshada: iyo 6.60 mm
Dhererka Madaxa: 13 mm 13.8rnrn 14.5mm 15mm
Midabka Madaxa: lacag, dahab, nano buluug ah, guduud, roobka roobka
Grit: Laga bilaabo ganaax ilaa dhab: 3XF 2XFXF F (ganaax) M (dhexdhexaad) C (adag) XC 2XC 3XC4XC5XC
MOQ ： 10pcs mid kasta
Isticmaalka: Qodista ciddiyaha, Manicure, Ciddinta Ciddiyaha, faylka ciddiyaha
Hore: Warshadda xirfadda leh ee Mashiinka Qodista ee Ciddiyaha - Xirfadlaha Farta Xirfadda Ciddiyaha Ciddiyaha Korontada Ciddiyaha Mashiinka Mashiinka Manicure Pedicure Kit Farshaxanka Faylka Farshaxanka Farshaxanka - Yaqin
Xiga: Calaamadda Gaarka ah ee Carbide Cid Qodista Qalabka Farshaxanka Ciddiyaha
Carbide Musmaar Qodista Bit
Cidiyaha Carbide Drill Bits Professional
Cidiyaha Carbide Milling Cutter
Qodista Ciddiyaha Carbide
Ciddiyaha Daloolinta Calan Carbide
Duufaan Carbide Burbur ah oo Mashiinka Ciddiyaha ah
Tungsten Carbide 4 Isbuuc Dib -u -buuxin
Calaamadda Gaarka ah ee Carbide Ciddiyaha Qodista Quruxda Nai ...
Tungsten Carbide qaabka koorta waxoogaa
Cidhifka Flat Top Tungsten Carbide Carbide Drill Bits
NO.25 Wadada Waqooyiga Fengxiang, Degmada Liangxi, Magaalada Wuxi, Gobolka Jiangsu, Shiinaha.
Horumarinta Farshaxanka Cidiyaha
Right Xuquuqda daabacaadda - 2020-2020: Dhammaan Reserved Rights.